Miresaka Ny Fitsarana An-tendrony Ao Amin’ny Firenena Ny Lahatsary Mannequin Challenge Bahrainita · Global Voices teny Malagasy
Miresaka Ny Fitsarana An-tendrony Ao Amin'ny Firenena Ny Lahatsary Mannequin Challenge Bahrainita
Voadika ny 29 Novambra 2016 5:04 GMT
Pikantsarin'ny lahatsary Mannequin Challenge Bahrain.
Nanome endrika Mannequin Challenge mba hiresahana ny fitsarana an-tendrony ao Bahrain i Omar Farooq , mpanatontosa sarimihetsika sady mpikatroka Bahrainita .
Nalaza be tao amin'ny media sosialy ny Mannequin Challenge, izay ahitana mpandray anjara tsy mihetsika ao anaty mozika sy fakan-tsary mandehandeha ao amin'ny efitrano. Nilaza ny mpanolotra fandaharana Amerikana ao amin'ny fahitalavitra NPR fa ” niainga avy amin'ny lahatsarin'ny mpisera @pvrity___ izany rehetra izany izay ahitana vondrona mpinamana tao amin'ny lisea Edward H. White any Jacksonville, Fla., izay namorona ny lahatsary voalohany [tamin'izany fomba izany].”
#manequinchallenge ZARAO‼️ RT‼️ pic.twitter.com/k1BqR6iZ1p
Ao anatin'ity lahatsary amin'ny endrika Bahrainita ity, na izany aza, nisafidy ny hanasongadina ny feon'ny mpandray anjara tsirairay mba hitsikerana ny fiarahamoniny i Farooq.
Manomboka amin'ny teny ‘fampitandremana’ mivaky toy izao ny lahatsary :
Tsy miresaka momba ny [fiaraha-monina] iray fotsiny izahay ao amin'ity lahatsary ity. Ianareo rehetra no tianay ambara, ny fiarahamonina rehetra.
Ary avy eo dia nanontany i Farooq hoe: “Ahoana no hevitry ny fiarahamonina?”
Toy izao manaraka izao ny filazan'ny mpandray anjara tsirairay :
Lehilahy mitafy lobaka kaki: Eh, ianareo mieritreritra Masha Allah [vaovao tsara]! Moa ve tianareo ny hilazako aminareo ny fomba anaovana izany?
Lehilahy mamaky gazety: Tsy matotra ny tanora amin'izao andro izao . Enga anie Allah hisoroka ny loza.
Vehivavy telo mitafy hijab: Izy rehetra ireo? Tia manao safobemantsina ny olana aminareo.
Lehilahy manao fehitanana maitso : Nahoana ianareo no miresaka momba ny olona mitafy hamama [fitafin'ny mpitondra fivavahana Shiita]? Aza manafintohina ireo mitafy hamama, ianareo mpanavakavaka ara-pivavahana !
Lehilahy mitafy agal [karazana fehiloha mainty ]: Inona no tianareo holazaina: ‘isika'? Ianareo no mpanavakavaka ara-pivavahana!
Ankizivavy milamina : Izany no fomba fijerin'ny fiarahamonina. Izany no antony hialako aminareo.
Mpanohana ISIS (fantatra ihany koa amin'ny hoe Daesh na ISIL) : Any amin'ny helo no anjaranareo. Maharitra ny fanevan'i Allah .
Lehilahy manao solomaso: Alaviro ny ady ry zareo! Izany indrindra no tian'ny Tandrefana ataontsika .
Lehilahy manao lobaka Nirvana : Fifandirana? Enga anie Allah hamindrà fo amin'i Saddam [matetika tenenin'ny olona manohana an'i Saddam Hussein].
Lehilahy iray hafa : Ahoana? Enga anie Andriamanitra handefa anareo any ankoatra [izay midika hoe “Andriamanitra anie hanasazy anareo ‘]
Mpiteny anglisy: Na inona na inona. Ry zalahy, tsy dia tena manan-danja izany.
Lehilahy mitaingina bisikileta: Tsy mahalala ianareo ! Mitenena teny arabo!
Lehilahy mitafy manga: Tsy misy ny tsy mahalala afatsy ny fitondram-panjakana.
Lehilahy iray hafa: Satroboninahitra eo ambony lohanareo ny fitondram-panjakana sy ny lalàna, ry mpamadika a!
Lehilahy manao agal sy lehilahy mitafy palitao: Irana no anton'ny zava-drehetra izay mitranga amintsika.
Lehilahy mipetraka: Eto izahay. Tsy afaka miaro ny tenanay izahay na dia miady aza.
Lehilahy iray hafa: Fantatrao ve fa ny fankahalana no mahatonga ny herisetra? Enga anie hifankatia bebe kokoa ianareo.
Lehilahy roa mipetraka : Mifankatia hoe? Mazava ho azy fa miresaka momba fanambadian'ny pelaka ianareo.
Lehilahy roa : Vokatry ny fampitam-baovao framasao mpamaly faty izany.
Lehilahy iray hafa: Inona no dikan'ny framasao?
Lehilahy mitafy mena: [amin'ny feo maneso] Ma-Sony na Ma-Apple?
Lehilahy mitondra iPhone: Famoronan'ny olona iray izay nanova an'izao tontolo izao ny Apple. F'inona ‘ty nataonareo?
Vehivavy manao hetsi-panoherana: Moa ve ianareo milaza fa tsy manana anjara ao amin'ny fiarahamonina ny ankizivavy ?
Lehilahy miavonavom-pijery : Tiako raha mba mahita fihetsiketsehana isan'andro aho!
Lehilahy mihantra mipetraka: Nahoana no toy izany? Nahoana izy Ireo no manana ny zava-drehetra kanefa tsy manana akory aho na dia sakafo hohanina aza.
Lehilahy mipetraka amin'ny seza misy kodiarana: Misaotra an'Andriamanitra. Fara faharatsiny afaka mandeha ianareo.
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny fantsom-baovao Saodiana Al-Arabiya, nilaza i Farooq fa natao hanaovana sarimihetsika ireo hevitra ireo, kanefa nanapa-kevitra ny hanararaotra ny fanaovana izany izy rehefa nahita ny Mannequin Challenge nalaza an-tserasera ;
Nanambara ny tanjony tao ambadiky ny lahatsary ilay Bahrainita mpandefa lahatsary YouTube Omar Farook.
Nanovo hevitra avy amin'ny fitroarana malaza izay nanomboka tao Bahrain dimy taona lasa izay [mg] i Farooq rehefa nanontaniana momba ny hevi-dehibe sy ny hafatra avy ao amin'ny lahatsary. Nisedra famoretana mahery setra avy amin'ny manampahefana io hetsika io:
Nanatri-maso ny krizy tamin'ny taona 2011 izahay Bahrainita. Mino aho fa tokony hatsahatra ny ady teo amin'ny Sonita sy ny Shiita. Mbola misy olona mampiasa vazivazy mpanavakavaka ara-pivavahana izay mety ahatonga fifandirana eo amin'ny fiarahamonina sy fankahalana eo amin'ny vahoaka.
Nahazo mpijery maherin'ny 263.000 ny lahatsary hatramin'ny nivoahany.